Zingaki izintaba-mlilo ezikhona eSpain ▷➡️ Postposmo | I-postposm
Zingaki izintaba-mlilo ezikhona eSpain
U-Iris Gamen | 30/05/2022 16:54 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2022 00:30 | Imvelo
Kokuthunyelwe kwangaphambilini esikushiya ngezansi, sikhulume ngezintaba-mlilo eziqhuma kakhulu emhlabeni. Kulo mcimbi, sizogxila ezweni elithile, sizokhuluma ngokuthi zingaki izintaba-mlilo eSpain.. Sizowahlukanisa ngemiphakathi ezimele, sizoveza ukuthi yimiphi esebenzayo, engasekho noma elele futhi sizokhombisa ukuthi yimiphi emangalisa kakhulu futhi ephephe kakhulu ukuyivakashela.
izintaba-mlilo eziqhuma kakhulu emhlabeni
Akwaziwa umhlaba wonke, ukuba khona eSpain kwezintaba-mlilo ezingaphezu kwekhulu ezihlakazeke kumephu. Indawo eyinhloko enentaba-mlilo iningi labantu eliyaziyo igxile eziQhingini zaseCanary, ukhohlwe ukuthi futhi kuyo yonke indawo ye-peninsula ungathola inani elikhulu lezintaba-mlilo.
Sonke sikhumbula ukuqhuma ezweni lakithi kwentaba-mlilo iCumbre Vieja eLa Palma ngoSepthemba 2021.. Izintabamlilo ziyizakhiwo ze-geological lapho i-magma noma inqwaba eyakhiwe ngamatshe ancibilikisiwe ixoshwa. Le magma ihlukaniswe izingxenye ezimbili, i-lava namagesi. Okulandelayo sizochaza ukuthi lesi simo sihlanganisani, bangaki abaseSpain nokuthi yiziphi ongazivakashela.
1 Zakhiwa kanjani izintaba-mlilo?
2 Izintaba-mlilo eSpain
3 Izintaba-mlilo ezisebenzayo, ezingasekho noma ezithule
4 Uhlu lwezintaba-mlilo eSpain
4.1 Izintaba-mlilo eFuerteventura
4.2 Izintaba-mlilo eGran Canaria
4.3 Izintaba-mlilo eTenerife
4.4 Izintaba-mlilo zaseLa Palma
4.5 Izintaba-mlilo zaseLanzarote
4.6 Izintaba-mlilo ze-El Hierro
4.7 Izintaba-mlilo La Gomera
4.8 Izintaba-mlilo Catalonia - La Garrotxa
4.9 Izintaba-mlilo zaseMurcia
4.10 Izintaba-mlilo e-Almeria
4.11 Izintaba-mlilo eCastilla La Mancha - endaweni yaseCampo de Calatrava
4.12 Izintaba-mlilo emphakathini waseValencian - Iziqhingi zaseColumbretes
5 Izintaba-mlilo okungafanele uphuthelwe
5.2 I-Cumbre Vieja neTeneguia - La Palma
5.3 Santa Margarida - Girona
Zakhiwa kanjani izintaba-mlilo?
Izintaba-mlilo, ukwakheka kwe-geological ngokuphuka endaweni yoqweqwe lomhlaba lapho i-magma, amagesi kanye namafu omlotha kuxoshwa khona. Lawa maqoqo ezakhi ezixoshiwe avela ngaphakathi komhlaba.
Lapho lezi zakhiwo ziqhuma, udaka luphuma emigodini bese lunqwabelana phezulu. Lapho lezi zintaba-mlilo zinqwabelana, kwakheka lokho esikwazi ngokuthi intaba-mlilo.
Ngokuvamile zakha eduze kwemingcele ye-tectonic plate., kungenzeka ngoba ziyahlukanisa okwenza kudaleke izimbobo okuphuma ngazo i-magma. Noma ngakolunye uhlangothi, ngoba elinye lamapuleti seliqalile ukushelela ngaphansi kwelinye.
Gcizelela ukuthi ukubonakala kwentaba-mlilo kungase kwenzeke nasezindaweni lapho kungekho ukunyakaza kwamapuleti, lawa maphuzu aziwa ngokuthi izindawo ezishisayo. Ukubonakala kwezintaba-mlilo kulawa maphuzu kungenxa yokuthi kukhona ama-magma plumes akhuphukayo. Enye yezindawo ezishisayo ezaziwa kakhulu emhlabeni indawo yaseHawaii.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwalolu shicilelo, akuzona zonke izintaba-mlilo ezitholakala eSpain ezitholakala endaweni yaseCanary Islands. Indawo yaseSpain inezintaba-mlilo ezingaba yikhulu ezisakazeke kulo lonke imephu, ezinye zazo ezisasebenza kanti ezinye eziningi azisekho.
Ngenyanga kaSepthemba wonyaka odlule, 2021, kwesinye seziQhingi zaseCanary, ikakhulukazi eLa Palma, kwaqhuma intaba-mlilo yaseCumbre Vieja. Lokhu kuqhuma kubeka lesi siqhingi njengesesishiyagalombili ukuhlupheka selokhu kwaqala amarekhodi. Eminyakeni engaphezu kwengu-50 edlule, naseziqhingini, ukuqhuma kokugcina kwentaba-mlilo kwenzeka eSpain. Ngonyaka ka-1971 ngenyanga ka-Okthoba, intaba-mlilo yaseTeleguía yaqhuma.
Ezweni lonke, Eminyakeni engu-11 edlule ukuqhuma kokugcina kwentaba-mlilo kwenzeka, kodwa kwakungeyona indawo yasemhlabeni njengeningi, kodwa kulokhu kwakungaphansi kwamanzi.. Lesi senzakalo senzeke esiqhingini sase-El Hierro futhi sabangela ukwakheka kwentaba-mlilo ngamamitha angu-400 ukujula.
La Indawo edume kakhulu yezintaba-mlilo eSpain, itholakala eziQhingini zaseCanary, kodwa kunezindawo ezihlukene intabamlilo engxenyeni yeziqhingi. Lezi zindawo zifaka i-Gerona, i-Cabo de Gata e-Almería, i-Cofrentes e-Valencia, i-Ciudad Real kanye ne-Columbretes Islands e-Castello.
ISpain inezintaba-mlilo ezingaphezu kwekhulu ezisakazeke kuyo yonke indawo yayo, ezinye zazo ezisaqhuma noma ezingasekho. Esigabeni esilandelayo sizobona ukuthi yiziphi ezisesimweni esisodwa noma kwesinye.
Izintaba-mlilo ezisebenzayo, ezingasekho noma ezithule
Sesibonile kakade ukuthi eSpain, kunenqwaba yezintaba-mlilo ezisabalele emiphakathini ehlukene ezimele. Kodwa esingakakwazi okwamanje ukuthi yimuphi kubo osasebenza noma cha.
I-Los izintaba-mlilo ezisebenzayo babizwa labo, abangangena ohlelweni lwe ukuqhuma noma nini. Izintaba-mlilo eziningi zikulesi simo esithule. Isikhathi esithatha lesi sigameko sokuqhuma akwaziwa ngokuqinisekile ngoba singahluka ngezinsuku, izinyanga noma iminyaka.
elele noma engasebenzi, isetshenziselwa ukubhekisela kulezo zintaba-mlilo ezinezimpawu zokusebenza kodwa eziye zahlala isikhathi eside kakhulu. Ngisho, yebo ayizange ibe nokuqhuma emakhulwini eminyaka ihlukaniswa kuleli qembu.
Ekugcineni, labo abaziwa ngokuthi ezishabalala yilezo ezingazange ziqhume eminyakeni yokugcina ye-25000.
Ku Iziqhingi zaseCanary, kunezintaba-mlilo ezisebenzayo. Kule ndawo selokhu kwaqoshwa amarekhodi, sekurekhodwe ukuqhuma okungaba ngamashumi amabili. Okunye kwalokhu kuqhuma kube ngamandla amakhulu kanye nesikhathi eside.
Komunye umasipala waseSpain, njenge Girona, izintaba-mlilo ezimbili nazo akhiwe isimo asebenzayo njengeSanta Margarida epaki yemvelo yentaba-mlilo yaseGarrotxa kanti enye yazo yiCroscat nayo eyingxenye yale ndawo yentaba-mlilo.
Uhlu lwezintaba-mlilo eSpain
Njengoba kunezintaba-mlilo ezingaphezu kwekhulu ezisakazeke kubude nobubanzi bemephu yeSpanishi, ngezansi, sikunikeza uhlu olunegama nendawo yazo ngayinye yazo.
Insimu yentaba-mlilo yase-Isla de los Lobos
Izintaba-mlilo eGran Canaria
I-Roque Nublo stratovolcano
i-sleta volcanic field
I-Pedro Gil Mountain Range
I-Caldera de las Canadas
Izintaba-mlilo zaseLa Palma
Izintaba zaseCumbre Vieja
I-North Ancient Massif
El Charco Volcano
I-volcano yaseSan Martin
I-volcano yaseSan Juan
I-volcano yaseSan Antonio
Intaba-mlilo iLa Corona
Izintaba-mlilo ze-El Hierro
I-Black Loin Volcano
Izintaba-mlilo La Gomera
Izintaba-mlilo Catalonia - La Garrotxa
I-volcano yaseGranollers de Rocacorba
Puig de la Banya del Boc volcano
I-Clot de I'Omera volcano
I-volcano yasePuig d'Adri
Intaba-mlilo yeCrosa de Sant Dalmai
Intaba-mlilo yasePuig Roig
I-volcano yaseSant Marc
Can Tià volcano
Intaba-mlilo yaseTuta de Colltort
I-volcano yaseSant Jordi
I-Pla sa Ribera volcano
I-volcano yasePuig Subià
I-volcano yaseSanta Margarida
I-volcano yasePuig de Mar
I-volcano yasePuig de Martinya
Puig de la Costa volcano
I-volcano yasePuig Jordà
I-volcano yasePuig de la Garsa
I-volcano yasePuig Astrol
Ingabe i-volcano yaseBarraca
I-Bac de les Tries volcano
I-volcano yasePuig de Bellaire
I-volcano yasePuig de I'Estany
I-volcano yasePuig de I'Os
I-Cabezo Negro, i-Pico Cebolla ne-Los Pérez
Cabezo Beaza, Cabezo de la Fraila kanye noCabezo Ventura
isibaya sezimvu esiyindilinga
I-Cerro del Hoyazo
Indawo yentaba-mlilo yaseCóbdar
Morron de Mateo
Igquma likaseyili omhlophe
El Plomo Boiler
Izintaba-mlilo eCastilla La Mancha - endaweni yaseCampo de Calatrava
Ichibi lentaba-mlilo laseMichos
Ichibi lentaba-mlilo laseLa Alberquilla
Ichibi kanye nentaba-mlilo yaseLa Posadilla
Intaba-mlilo yasePeñarroya kanye nechweba
Beer Hole Sea
I-Mortar Hole Sea
I-Volcanic Castles of Welcome
I-volcanic massif yaseCalatrava
Intaba-mlilo iCerro de los Santos
Izintaba-mlilo emphakathini waseValencian - Iziqhingi zaseColumbretes
Intaba-mlilo yase-El Berganin
Intaba-mlilo yaseLa Horadada
Lezi yizindawo ezihlukene zezintaba-mlilo kanye nezintaba-mlilo ezingatholakala zihlukaniswe ezindaweni ezihlukene zendawo yaseSpain.
Izintaba-mlilo okungafanele uphuthelwe
Sibonile ukuthi eSpain kunezindawo ezihlukene zezintaba-mlilo ezisabalele kulo lonke imephu kazwelonke, sikukhuthaza lapha ukuthi ufunde okwengeziwe ngezinye zazo. Ngakho, Sizokutshela mayelana nokukodwa okungafanele ukuthi kuphuthelwe ohlwini lwakho lohambo oluzayo.
Njengoba iphakeme ngamamitha angu-3715, iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke eSpain futhi ingeyesithathu emhlabeni. Itholakala eCanary Island, ikakhulukazi eTenerife. Futhi, ingenye yezindawo ezivame kakhulu izivakashi zikazwelonke nezamazwe ngamazwe esiqhingini.
I-Cumbre Vieja neTeneguia - La Palma
Ezinyangeni ezimbalwa kuzobe sekuphele unyaka kwaqhuma le ntaba-mlilo kuleli. Esiqhingini saseLa Palma, awukwazi nje ukuvakashela le ntaba-mlilo ngomsebenzi wakamuva, kodwa futhi ungavakashela i-El Teneguía.
Santa Margarida - Girona
Intaba-mlilo yaseSanta Margarida iyingqayizivele edolobheni lase-Olot, eGirona. Kuwukwakheka okungajwayelekile kakhulu ukukubona, ngoba kuhluke kakhulu kulawa ashiwo ngenhla njengoba kubonakala sengathi sibhekene nentaba-mlilo njengoba kungabonakala esithombeni. Ngaphakathi kwe-crater yale ntaba-mlilo kune-hermitage.
Le ntaba-mlilo itholakala eLa Garrocha, ikakhulukazi endaweni ILa Garrotxa Volcanic Zone Natural Park. Kuleli paki, kunezigaxa zentaba-mlilo ezingu-40 kanye nokugeleza kwe-lava engu-20. Ngakho-ke, yindawo okungafanele nakanjani uyiphuthe.
Izintaba-mlilo eSpain azinawo umsebenzi omningi, kodwa ngokuqhuma kweCumbre Vieja ezinyangeni ezimbalwa ezedlule siye saqaphela ukuthi uma ulindele okungenani into enhle njengoba ibhubhisa ingaqala.
Sincoma ukuthi uzazise ngalezo zindawo ezinezintaba-mlilo ofisa ukuzivakashela, ngoba zonke zingase zingavulekele umphakathi. Jabulela, futhi umangale ngalokhu kwakheka komhlaba esinakho ezweni lakithi.
Indlela ephelele ye-athikili: I-postposm » Imvelo » Zingaki izintaba-mlilo ezikhona eSpain
Ingwane inezinhliziyo ezingaki?
i-tsunami enkulu kunazo zonke emhlabeni